Dowladda Jarmalka oo hub fara badan ka soo heshay kooxaha Midigta fog ee Xag jirka ah
Mogadishu - 16:55:02
Saturday September 28, 2019 - 21:55:28 in Wararka by Super Admin
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jarmalka ayaa sheegtay in baaritaanno dembiyada la xiriiray oo uu booliska dalkaasi sameeyay 2018 uu hub fara badan kaga soo ururiyay kooxaha midigta fog ee xag jirka ah.
Hubkan gacanta lagu soo dhigay 2018 ayaa gaarayay 1091 hub, iyagoo ka badan intii Boolisku soo aruruiyay sanadkii ka horreeyay ee 2017-kii (676 hub).
Telefishinka (ARD) ee Jarmalka ayaa soo helay macluumaadka sida ay u kala baxayeen hubkaasi ciidanku soo qabteen, waxaana ay isugu jireen qoryaha fudud, Bistoolado, walxaha qarxa, Tooreeyo iwm, iyadoo Booliskuna xaqiijiyeen in hubkaasi lagu fuliyay dembiyo gaaraya 563, kuwaas oo 235 dembiyo ay yihiin kuwo ay geysteen dad ku tilmaaman Midig fog.
Mathias Quent oo ah Khabiir ku takhasusay kooxaha Midigta fog ee xag jirka ah oo ka tirsan machadka Dimuqraadiyadda iyo Bulshada Rayidka ah ee (IDZ) ayaa waxa uu sheegay in kororka hubkani Boolisku soo qabtay ay tahay arrin halisteeda leh.
Wuxuu xusay in kooxaha Midigta fog hubka ay haystaan ay ku fuliyaan weerarro ay ku qaadayaan dadka laga tirada badan yahay iyo siyaasiyiin uu loollan ka dhexeeyo, iyadoo ujeedkooduna yahay in ay argagax ku ridaan bulshada, dalkana ka eryaan dadka ajnabiga ah, waxaana uu sheegay in taasi ay keeni karto dagaal sokeeye.
Nagala soo xiriir; info@ishawararka.net
Holland oo isbitaalladeeda ku amartay dib u soo celinta … 29/03/2020 - 22:12:44
Waxaa la xiray isagoo dhallinyaro ah waxaana muddo gaab … 18/04/2020 - 22:11:58
Filimkii 10 sanadood ka hor saadaaliyey Feyruska Corona … 11/03/2020 - 22:22:56